हत्यामा संलग्न दुइलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गर्यो। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
हत्यामा संलग्न दुइलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गर्यो।
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, साउन २७, २०७७ १३:३०:४८
२७साउन,काठमाडौं/काठमाडौंको गोंगबुमा कृष्णबहादुर बोहोराको हत्यामा संग्लन आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले चितवन कालिका नगरपालिका–७ घर भई हाल टोखा नगरपालिका १० नवज्योति मार्ग बस्ने ३७ वर्षीय कल्पना मुडभरी पौडेल र उनकी १५ वर्षीया छोरीलाई सार्वजनिक गरेको हो । कल्पना मोडलिङ क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको खुलेको छ ।
आइतबार बिहान टोखा नगरपालिका १० गोंगबु नवज्योति मार्गमा कालो रंगको सुटकेशबाट रगत जस्तो पदार्थ बगिरहेको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको थियो । प्रहरी टोलीले उक्त सुटकेस खोली हेर्दा सुटकेसभित्र टाउको बिनाको मानिसको शव फेला पारेको थियो । सोही स्थानमा केही परि टाउको लगायत शरीरको अन्य भाग झोलामै फेला परेको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा मृतक कृष्ण बहादुर बोहोरा कल्पनाको कोठामा बेला-बेलामा आइ भेट्ने गरेको खुलेको छ ।
मृतकले कल्पनाको फोटो राखी फेक फेसबुक आइडी खोली चलाउने गरेको र आफू अनुकुल चल्नको लागि दबाब दिने गरेको समेत पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार शनिबार मात्रै बोहरा आफू बसेको होटलबाट बा ७२ प ५६४४ नंम्बरको स्कुटी प्रयोग गरी कल्पनाको कोठामा पुगेका थिए । सोही क्रममा कल्पनाले कृष्णबहादुरलाई दही, चिउरा, मासु र भोड्का खुवाएको खुलेको छ ।
दहीमा कल्पनाले ५ वटा निन्द्राको औषधी मिसाएको पाइएको छ । खानेकुरा खाएपछि बोहोरालाई लठ्ठ परी सुतेको मौकामा फलामको मारतोल (ह्याम्मर) ले मृतकको अण्डकोषमा प्रहार गरेको खुलेको छ ।
त्यसपछि मृतकलाई सलको प्रयोग गरी घाटीमा थिचेको र मरेको यकीन गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार त्यसपछि कल्पना आफैले धारिलो हतियार प्रयोग गरी टाउको र खुट्टा छिनाई झोलामा राखी आफैंले फालेकी थिइन् । शवको बाँकी भाग कालो रंगको सुटकेशमा राखी पश्चिम बाटोको छेउमा फाली कोठामा फर्कीएकी थिइन् ।
हत्यापछि बेलुकी बिरामी लिएर काठमाडौं आई फर्किन लागेको चिनेजानेको एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई फोन गरी भाडा तिरी सोही एम्बुलेन्सबाट चितवन गएको पाइएको छ । अनुसन्धानको क्रममा कल्पना मुडभरी (पौडेल) घटनामा संलग्‍न भएको र उनकी छोरी शव व्यवस्थापनमा संलग्‍न रहेको खुलेको हो ।
प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको धारिलो हतियार, हिर्काउन प्रयोग भएको ह्याम्मर, रगत लतपतिएको पञ्जा, म्याट्रेसको टुक्रा, घाँटी कस्‍न प्रयोग गरेको कालो रंगको सल, सुटकेशको ह्याण्डल, नाम्लोमा प्रयोग भएको डोरीको टुक्रा, मृतकले लगाएका तथा झोलामा रहेका मृतकका कपडाहरु,स्लिपिङ ट्यावलेटको खोल र मोबाइल सेटहरु बरामद गरेको जनाएको छ ।